Sidee cunugaaga uga badbaadin kartaa Qaaxo? – somali
Nuuneyaasha iyo carruurta yaryar badanaa difaaca jirkoodu wuu nugul yahay. Hadaba ayaga, gaar ahaan kuwa ka yar da’da 5 sano jirka si fudud ayay ku qaadi karaan cudurka Qaaxada. Qaaxada carruurtu way ka duwan tahay Qaaxada dadka waaweyn. Calaamadaheedu aad ayay u nuglaan karaan. Cunug ayaa markay ku dhacdo qufici kara, xoogaana jirran kara ama cunugga koritaankiisa ayaa is dhima.
Cunugaaga dhaqtarka u wad sida ugu dhaqso badan hadii aad uga shakido Qaaxo. Qaaxada carruurta waxaa lagu daaweyn karaa daaweynta saxda ah. Waxaa muhiim ah in la ogaado qofka cunugu ka qaaday cudurka, si asagana looga daweeyo Qaaxada oo uusan mar kale u gudbin.
Hadii Qaaxo laga helo qaar ka mid ah xubnaha qoyskaaga ama dad kale oo aad isu dhawdihiin, waxaa muhiim ah in durba baaritaan lagu sameeyo carruurta yaryar ee u dhawaa.
Hadii cunug uu leeyahay calaamadaha Qaaxada asagoon jirran daaweyn fudud ayaa lagu samaynayaa taasoo ka horistaageysa in hadhoow Qaaxadu kusii baahdo.
Tallaalka Qaaxadu wuxuu carruurta yaryar ka badbaadiyaa noocyada ugu xun Qaaxada. Tallaalku kama badbaadsho dadka waaweyn Qaaxo.
Finland tallaalkaa waxaa la siiyaa carruurta ugu jira halis cudurka Qaaxada. Xarunta qaabilaada magangalyo doonka waxaa qiimayn lagu samaynayaa in cunugaagu u baahan yahay tallaal. Cunug horay loo soo tallaalay hadana mar kale Finland laguma tallaalayo. Tallaalka Qaaxadu calaamad nabar ayuu ku reeba jirka. Calaamadaa ayaa qofi ku garan karaa hadii cunug lagu soo tallaalay wadankiisii. Hadii calaamada tallaalka la waayo, dhiigga ayaa laga baarayaa. Halkaa ayaa dhaqtarku ka ogaanayaa in tallaal loo baahan yahay iyo in kale.
Hadii cunugaagu ku dhasho Finland markii uu saas u dhashaba waa la tallaalayaa. Xogta arinkan kusaabsan waxaad ka heleysaa isbitaalka.
© 2020 somali • Powered by GeneratePress